वातावरण मा सुधार नआएकाले पुन ७ दिनका लागी शैक्षिक सस्था बन्द हुन सक्ने – Khabar Patrika Np
वातावरण मा सुधार नआएकाले पुन ७ दिनका लागी शैक्षिक सस्था बन्द हुन सक्ने
प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत्र २३, २०७७ समय: १९:३२:३४
नेपाल मा अहिले बाक्लो तुयेलो ले गर्दा आम सर्वसाधारण जनताले दुःख भोग्नु परिरहेको छ।
यसको कारणले सिक्षा मन्त्रालय द्वारा ४ दिनका लागि विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। यो अबस्था रहिरहेका ले पुन ७ दिनका लागी शैक्षिक सस्था बन्द हुन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
शरीरमा मुसा पलाएर हैरान हुनुहुन्छ ? या मुसा पलायो भने के गर्ने भन्ने चिन्तामा हुनुहुन्छ ? चिन्ता मेटाउने नाममा मुसा काटेर–कोट्याएर फाल्ने गल्ती नगर्नुहोस् । मुसाबाट रगत निस्किएपछिको परिणाम झनै भयावह हुनसक्छ ।
शरीरमा मुसा ‘ह्युमन प्यापिलोमा’ भाइरसको संक्रमणले आउँछ । नवजात शिशुबाहेक प्राय: सबै उमेरका मानिसमा यो रोग लाग्नसक्छ । भाइरसको संक्रमणपछि छालामा नदुख्ने खालको सानो ट्युमरजस्तो आउँछ । यो कसैमा कम हुन्छ भने कसैमा धेरै । धेरै या थोरै आउने दर मानिसको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा भर पर्छ । रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएकामा मुसा बढी आउँछ । बलियो क्षमता भएकालाई एक–दुईवटा आएर आफैँ हराउन सक्छ ।
मुसा धेरै मानिसमा निश्चित समयपछि आफैँ निको हुन्छ । रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताअनुसार ढिलो–चाँडो निको हुनसक्छ । मुसा निस्किने क्रम र आकार पनि बढ्न थाले तत्काल छालारोग विशेषज्ञसँग सल्लाह लिएर उपचार गराउनुपर्छ ।